Dibana namaqhawe oKhenketho kwiMarike yokuHamba yeHlabathi yaseLondon namhlanje
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Dibana namaqhawe oKhenketho kwiMarike yokuHamba yeHlabathi yaseLondon namhlanje
Iindaba zeManyano • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba eziHlumayo zase-UK • I-WTN
eTurboNews umpapashi uJuergen Steinmetz, okwanguSihlalo weWorld Tourism Network, kunye nelungu leBhodi yesiGqeba seBhodi yezoKhenketho yase-Afrika bafike eLondon ngeCawe, belungele ukunikela ubungqina kunye nokuthatha inxaxheba ekusungulweni kwakhona komboniso wezorhwebo wezokhenketho wesibini ngobukhulu kwihlabathi – iWorld Travel Market London ngoNovemba 1-3.
Namhlanje, i-World Travel Market eLondon iya kuvula iingcango zayo kwi-10.00 am kwi-Exhibition Centre ye-Excel eLondon.
Iinkokeli zokuhamba kunye nezoKhenketho ezivela kwihlabathi jikelele ziphinde zavela eLondon ukuze zihlangane, zibulise kwaye zixoxe.
I-World Tourism Network iya kwamkela i-Tourism Heroes namhlanje, ngoMvulo ngo-4.00pm kwiBhodi yezoKhenketho yaseKenya yima AF 150.
Ayisiyiyo kuphela Intengiso yeHlabathi yoKhenketho ithuba lokuyila, ukuvelisa kunye nokuthengisa iimveliso ezintsha zokuhamba kwiminyaka ye-COVID-19, kodwa ikwalithuba labo bashukumayo kwaye bashukumise ishishini ukuba bahlangane kwakhona emntwini. Olu manyano kufuneka lube nelizwi eliqinileyo ukukhokela uhambo olubuyela endleleni.
“Ukubhideka kufuneka kunyamalale ekuhambeni kwakhona.”, utshilo uJurgen Steinmetz. “IWorld Tourism Network ikulungele ukuba yinxalenye yengxoxo ebanzi. Akukho shishini njengesiqhelo okwangoku, kwaye ukusebenza kunye nabo bonke abachaphazelekayo ngoyena ndoqo wempumelelo. ”
Amagorha ezoKhenketho iqatshelwe yi Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi bayamenywa eKenya Stand (AF150) namhlanje ngo 4.00 pm. (NgoNovemba 1) Umbutho uya kuqonda amaqhawe amabini amatsha akwaSirayeli naseBarbados- kwaye iindwendwe ezininzi ezimangalisayo kulindeleke ukuba zibe yinxalenye yale ntlanganiso yokuqala ye-NON ZOOM yamalungu eWTN kunye nabaphulaphuli beWTM.
IWorld Tourism Network yasekwa njenge Ukwakha kwakhona uKhenketho Ingxoxo eqalwe ngolu papasho, iPATA, iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika, kunye neBhodi yezoKhenketho yaseNepal ngoMatshi ka-2020 ecaleni kwe-ITB Berlin erhoxisiweyo.
Ngaphezulu kwe-200+ yeentlanganiso zokusondeza zenze intsebenziswano kukhenketho nokhenketho kwihlabathi elisuka kumazwe ali-128. Injongo ye-WTN kukongeza ilizwi kubadlali abancinci nabaphakathi kukhenketho lwehlabathi kunye neshishini lokhenketho.
Iqhawe lokuqala lezokhenketho, uMhlonishwa. UNajib Balala, unobhala wezoKhenketho eKenya uza kubamba. Okwalindeleke ukuba azimase nguHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett waseJamaica, kunye noDkt. Taleb Rifai, owayenguNobhala-Jikelele we-UNWTO - bonke phakathi kwamaqhawe okuqala okhenketho aqatshelwe ngulo mbutho.
IBarbados izakwazisa iqhawe layo elitsha lezokhenketho kwaye kulindeleke ukuba izimase nomphathiswa, i-CEO yeBhodi yezoKhenketho, kunye neqela likamabonakude leSizwe.
UChristian Rosario, eTurboNews Umfoti ophumelele umvuzo woqobo uyakuthatha iifoto ezimangalisayo ukuze abelane ngazo.
NgoLwesithathu ngentsimbi ye-11.30 kusasa, uGqr. Peter Tarlow, umongameli we-WTN uza kube ethetha kwindibano Iseshoni yoKhuseleko lweCyber kwiHamba Phambili kwi-World Travel Market.
Ngaphandle kokufumana ukophulwa kwedatha enkulu kwiminyaka yakutshanje, ishishini lokuhamba lisagcwele imingxunya yokhuseleko. Iinqwelomoya ezinkulu kunye namakhonkco ehotele bayasokola ukukhusela amaqonga abo e-intanethi nasemva kokuba ukophulwa kwedatha yangaphambili kunye nohlaselo lwe-cyber lubhentsise ulwazi lwezigidi zabathengi kwaye bakhuphe izohlwayo kubalawuli babucala. Ngoku kunanini na ngaphambili, kubalulekile ukuba ishishini lokuhamba lihambelane nokutshintsha kwamaxesha kunye namanyathelo afunekayo ukuthintela ezo zoyikiso. Ngeli xesha le seshoni, iphaneli yeengcali ziya kwabelana ngokuqonda kumanyathelo amele ukuwathatha ishishini ukukhusela imingcipheko ye-cyber kunye nezoyikiso ukwenzela ukukhusela idatha yomthengi wabo.
I-World Travel Market iza kubamba iNgqungquthela yabaPhathiswa ye-UNWTO njengesiqhelo ne-WTTC. ISaudi Arabia kulo nyaka kulindeleke ukuba ibe nendima ebaluleke kakhulu.
UJurgen Steinmetz ukulungele ukudibana eTurboNews abafundi ngokobuqu kwi-World Travel Market. Nceda uqhagamshelane ne-WhatsApp: + 1-808-953-4705 okanye i-imeyile [imeyile ikhuselwe]